ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ Either နှင့် Neither အသုံးပြုမှုအကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
What is grammar? (သဒ္ဒါဆိုတာဘာလဲ) သဒ္ဒါဆိုတာ ဘာသာရပ်တစ်ခုရဲ့ စည်းကမ်း ဥပဒေသတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုရေးရမယ်၊ အရေးအသား၊ အထားအသို၊ ၀ါကျဆက်ပုံ၊ စကားလုံးတွေရဲ့ တည်နေရာ၊ သုံးစွဲရမယ့်နေရာ စတာတွေကို စည်းစနစ်တကျ ရှိစေဖို့အတွက် သဒ္ဒါဆိုတဲ့ ဥပဒေသ တစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဘာသာရပ်တစ်ခုကို လေ့လာတဲ့အခါမှာ သဒ္ဒါကို စနစ်တကျနဲ့ ပိုင်ပိုင်နို်င်နိုင်ဖြစ်အောင် လေ့လာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အခုပြောပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ This/ That စကားလုံးနှစ်ခုရဲ့အသုံးနူန်းတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ This ကိုတော့ ကိုယ်နဲ့နီးကပ်တဲ့အရာဝတ္ထု တစ်ခု ကို ပြောပြတဲ့သုံးပါတယ်။ That ကိုတော့ ကိုယ်နဲ ့အကွာအဝေးတစ်ခုမှာရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို ပြောပြချင်တဲ့အခါ သုံးပါတယ်၊ ဒီဥပမာလေးနှစ်ခုကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။ This isaflower. That isaflower.----- This ကို နာမ် တစ်ခုကိန်းကိုပြောပြချင်တဲ့အခါသုံးပြီးတော့ that ကိုတော့ ကိုယ်နဲ့ကွာဝေးတဲ့ နာမ်တစ်ခုအကြောင်းပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။ This isn’taflower. That isn’taflower. This isn’tapencil. This isapen. That isn’tapencil. That isapen. နောက်တစ်ခါ သူတို့တွေနဲ့မေးခွနး်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ Is thisaflower? Is thataflower? Is thisaflower ဆိုတဲ့စာကြောင်းမှာ ရိုးရိုးဝါကျကို မေးခွန်းပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Verb to be ကြိယာ Is ကိုရှေ့မှာထားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အဖြေက Yes it is. Is thataflower? မှာတော့ Verb to be ကြိယာ is ကိုရှေ့ထုတ်ထားပြီးတော့ရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး တော့ ကိုယ်ပြချင်တဲ့အရာဟာ ကိုယ်နဲ့အကွာအဝေးတစ်ခုမှာရှိနေတာမို့ Is thataflower. စသဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေ့သင်ကြားပေးမှာကတော့ Singular / Plural (n) နာမ်တစ်ခုကိန်းနဲ့အများကိန်းတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုကိန်းနဲ့အများကိန်းအကြောင်းပြောတဲ့အခါ ကျွန်တော့်မှာလက်တစ်ဖက်၇ှိတယ် I have One hand. One တစ်ခုရှိတယ်။ တစ်ခုကိန်းဖြစ်လို့ အိုကေ ကျွန်တော့်မှာလက်နှစ်ဖက်ရှိတယ်၊ နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် အများကိန်းဖြစ်သွားတယ်။ ဒါဆို နာမ်(N) မှာ (S/es) ပေါင်းပေးရပါတယ်။ ဥပမာလေးတွေကြည့်လိုက်ရအောင် အရင်က သင်ခန်းစာတွေမှာသင်ကြားပေးခဲ့သလိုပဲ တစ်ခုကိန်းကိုအများကိန်းပြောင်းချင်တဲ့အခါ (s/es) ပေါင်းထည့်ကြတယ်။ ဥပမာ= Singular n - Plural n (ပုံမှန် s ထည့်ပေးနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေကတော့) One book – two books One orange – two oranges One pen - two pens One house - two houses နောက်တစ်ခါ (sh/ch/ss) နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့စကားလုံးတွေကိုတော့ (es) ပေါင်းထည့်ပေးရပါတယ်။ ဥပမာ- Dish - dishes Class - classes ဒါပေမယ့် တချို့ (y) နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့စကားလုံးတွေမှာတော့ (ies) ပေါင်းပေးမှ အများကိန်းဖြစ်သွားပါတယ်။ Baby - babies City - cities ဒါပေမယ့် မှတ်သားထားရမှာက boy နဲ့ key မှာတော့ (y) နဲ့အဆုံးသတ်ထားပေမယ့် ပုံမှန် s ပေါင်းထည့်ရုံပါပဲ။ ဒါကိုတော့ ယေဘူယျသိထားကြပေမယ့် တချို့နာမ်တွေကျ (S/es) ပေါင်းထည့်ရုံနဲ့ အများကိန်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တချို့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေဟာ အများကိန်းအသွင်ဖြစ်သွားတာနဲ့စကားလုံး (လုံးဝ) ကွဲပြားသွားတာတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဥပမာ -amouse ကြွက်တစ်ကောင် နှစ်ကောင် လိုိ့ရေးဖိုိ့အတွက် s/es ပေါင်းလို့မရတော့ပါဘူး။ ကြွက်ရဲ့အများကိန်းက (mice) ဖြစ်ပါတယ်။ နာမ်အနည်းကိန်းကို အများအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါ စကားလုံးဝပြောင်းလဲသွားတဲ့စကားလုံးတွေကတော့ Wife - wives Thief – thieves One man – two men One woman – two women One foot – two feet One child – two children One tooth – two teeth One mouse – two mice One goose – two geese နောက်တစ်ခါ အများကိန်းဖြစ်ပေမယ့် (s/es) မလိုတဲ့စကားလုံးတွေကတော့ One sheep – two sheep One deer – two deer One fish – two fish အများကိန်းမို့(fishes) မဟုတ်ပါဘူးနော်။ နောက်တစ်ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စကားလုံးတွေကတော့ Father in law – fathers in law Mother in law – mothers in law Brother in law – brothers in law Sister in law – sisters in law ဒီလိုစကားလုံးတွေဆိုရင်တော့ father, mother, brother, sister တို့မှာ s ပေါင်းပေးမှ အများကိန်းဖြစ်သွားပါမည်။
ဘာသာစကားတွေကို လေ့လာတဲ့အခါမှာ အက္ခရာတွေကို စတင်သင်ယူလေ့ရှိပါတယ်။ မြန်မာစာမှာ ကကြီးကနေ အ အထိ အက္ခရာတွေ ရှိသလိုမျိုးပဲ အင်္ဂလိပ်စာမှာလည်း အက္ခရာ ၂၆ လုံး ရှိပါတယ်။aကနေ z အထိပေါ့။ အဲ့ထဲမှာမှ အဓိက သရအက္ခရာ (vowel) ၅လုံးနဲ့ ပါ၀င်ပြီးတော့ ကျန်တဲ့ အက္ခရာ ၂၁ လုံးကတော့ ဗျည်း (consonant) တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (ပုံထဲမှာ တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။) သရ ၅ လုံးဟာ (a, e, i, o, u) ဖြစ်ပြီးတော့ ကျန်ရှိနေတဲ့ ၂၆လုံးကတော့ ဗျည်းအက္ခရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ consonant တွေကတော့ b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ MyanLearn ရဲ့ Grammar for Beginner အစီအစဉ်လေးကနေ ပြန်လည် ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Noun တွေရဲ့ singular, plural အကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ singular ဆိုတာကတော့ တစ်ခုကိန်း ဖြစ်ပြီးတော့ plural ဆိုတာကတော့ တစ်ခုထက်ပိုသော၊ အများကိန်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုကိန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်aဒါမှမဟုတ် an ကိို Noun ရဲ့အရှေ့မှာ အသုံးပြုကြသလိုပဲ အများကိန်းဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ s သို့မဟုတ် es ကို noun မှာ ထည့်ပေးရပါတယ်။ Noun တွေကို အများကိန်းအနေနဲ့ ရေးတဲ့အခါမှာ s သို့မဟုတ် es ကို ပေါင်းထည့်ပါတယ်။ ဘယ်ဟာက s ဖြစ်ပြီး ဘယ်ဟာက es ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတာကို ရှင်းပြပါမယ်။ ပထမတစ်ခုက “church” ဖြစ်ပါတယ်။ church က ch နဲ့ အဆုံးသတ်ပါတယ်။ ch နဲ့ ဆုံးတယ်ဆိုရင် es ပေါင်းထည့်ရပါတယ်။ နာက်တစ်ခုလည်း တူတူပါပဲ။ brush က sh နဲ့ အဆုံးသတ်ပါတယ်။ (church, brush, fox, dress) ch, sh, x, , z, s စတာတွေနဲ့ အဆုံးသတ်တဲ့ Noun တွေကို အများကိန်းပြောင်းတဲ့အခါမှာ 'es' ကို ပေါင်းထည့်ပေးရပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့ Noun ၃ ခု ရှိပါမယ်။ များသောအားဖြင့် o နဲ့ ဆုံးတဲ့ noun တွေကို s ပဲ ပေါင်းထည့့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ၃ခုကိုတော့ es ပေါင်းထည့်ရပါတယ်။ (potato, tomato, volcano) စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
A / an + Noun
ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ ‘a’ နဲ့ ‘an’ ကို အသုံးပြုခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သင်ကြားပေးမှာပါ။aသို့မဟုတ် an ကို Noun တွေရဲ့ အရှေ့မှာ အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီတော့ Noun ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ သိဖို့လိုပါပြီိ။ Noun ဆိုတာ သက်ရှိသက်မဲ့ ဒြပ်ရှိဒြပ်မဲ့ တို့ရဲ့ အမည်ဟူသမျှကို Noun လို့ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Noun တွေက တစ်ခုကိန်းဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ 'a' နဲ့ 'an' ကို အရှေ့မှာ သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဘယ်လို Noun တွေရဲ့ရှေ့မှာaသုံးပြီးတော့ ဘယ် Noun တွေရဲ့ရှေ့မှာ an သုံးလဲဆိုတာကို ရှင်းပြပါမယ်။ consonant တွေနဲ့ စတဲ့ Noun တွေကို 'a' နဲ့ တွဲသုံးပြီးတော့ vowel (a,e,i,o,u) နဲ့ စတဲ့ Noun တွေကို 'an' နဲ့ တွဲသုံးပါတယ်။ တချို့စကားလုံးတွေမှာ အသံထွက်ပေါ်မူတည်ပြီး ချွင်းချက်လေးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ...acat,adog, an elephant, an alligator
Subjective Pronoun တွေက အင်္ဂလိပ်စာမှာအရမ်းအရေးပါတဲ့ ပြုလုပ်သူ ကိုယ်စားအသုံးပြုတဲ့နာမ်စားတွေဖြစ်ပါတယ်။ I ကိုတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော်ပြတဲ့အခါ သုံးပါတယ်။ He ဆိုတာကတော့ ကောင်လေး၊ အမျိုးသားတွေအတွက် နာမ်စားသုံးပါတယ်။ She ကတော့ အမျိုးသမီးငယ်တာရော အသက် ကြီးတာရောအတွက် နာမ်စားအနေနဲ့သုံးပါတယ်။ It ကိုတော့ လူမဟုတ်တဲ့ သက်ရှိသက်မဲ့အရာတွေကို နာမ်းစားသုံးတဲ့အခါ သုံးပါတယ် (ဥပမာ - ဆင်၊ခွေး၊ ကြောင်၊ စာအုပ်၊ သစ်ပင် စတာတွေရဲ့ နာမ်စားအဖြစ် It ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။)။ နောက်တစ်ခု You ကတော့ မင်း၊ သင် ၊ (မင်းကို ရည်ညွန်းပါတယ်)။ We ဆိုတာကတော့ တခြားလူတွေနဲ့ကိုယ်ကိုတိုင်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး သုံးနူန်းလိုက်တာပါ။ (ဥပမာ - ငါလဲမြင်တယ်၊ မင်းလဲမြင်တယ် ဒါတို့ ငါတို့အတူတူ မြင်ကြတယ်နော် ဆိုတာမျိုးမှာ We ကျွန်တော်တို့၊ ငါတို့၊ ကျွန်မတို့လို့သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ They ကတော့ လူအများကြီးကိုညွန်းချင်တဲ့အခါ တိရိစာၦန်အများအပြားကို ညျွန်းချင်တဲ့အခါ ပြုလုပ်သူ (Sub) က တစ်ခုထက်ပိုတဲ့အခါမှာ They ကိုသုံးပါတယ်။
အခုသင်ပြပေးမည့် သင်ခန်းစာလေးကတော့ Possessive pronouns တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Possessive pronouns ဆိုတာက ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြနာမ်စားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အခါ၊ တခြားသူကပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အခါ သူတို့တွေအစားသုံးတဲ့နာမ်စားတွေဖြစ်ပါတယ်။ I he she it you we they My his her its your our their Mine His Hers Its Yours Ours Theirs ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပြတာတူတယ်ဆိုပေမယ့် ပိုင်ဆိုင်မှုပြနာမဝိသေသန (Possessive adj) တွေရဲ့နောက်မှာ နာမ် (Noun) ထည့်ပေးရပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုနာမ်စားတွေမှာကျ တစ်တည်းသုံးရပါတယ်။ နာမ်မလိုတေ့ာပါဘူး။ စကားလုံးများအသံထွက်ပြမည်။ ဥပမာလေးတွေမှာသုံးကြည့်လိုက်ရအောင်နော်… ဒါက ကျွန်တော့်မာကာပါ။ This is my marker. ပိုင်ဆိုင်မှုနာမ်စားနဲ့ပြန်ရေးတဲ့အခါ This is mine. ဒါကမင်းပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူး။ This isn’t yours. This is mine. ဒီရုပ်ပုံလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။ ဒီကောင်လေးမှာဦးထုပ်လေးရှိနေတယ်။ ဒါဆို ဦးထုပ်လေးက သူ့ပစ္စည်းပါ။ ဒါက သူ့ပစ္စည်းပါ လို့ ပိုင်ဆိုင်မှုနာမ်စားနဲ့ပြန်ရေးတဲ့အခါ This is his. ဒါကမင်းရဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူး။ This isn’t yours. This isn’t mine. This is his. ဒီကောင်မလေးမှာတော့ ပန်းပွင့်လေးရှိနေတယ်။ ဒါဆို သူမပစ္စည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။ This is hers. ဒါက သင့်ပစ္စညး်မဟုတ်ပါဘူး။ This isn’t yours. This isn’t mine. This is hers. ဒီကခွေးလေးမှာဘောလုံးလေးရှိတယ်။ ဒီနေရာမှာ မှတ်သားထားရမှာပါ အရင်ကစာကြောင်းတွေလို့ This is its. လို့ရေးလို့မရတော့ပါဘူး။ Its ရဲ့နောက်က နာမ်ထည့်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမှန်က This is its ball. လို့ရေးသားရပါမယ်။ this isn’t yours. This isn’t mine. This is its ball. နောက်တစ်ခါ လူနှစ်ယောက်က အိမ်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုရင် အများကိန်းပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတဲ့နာမ်စား their ကိုသုံးရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် This is their house. This is not mine. This is not yours. နောက်တစ်ခါ ဒီကစာအုပ်တွေကို သူတို့နှစ်ယောက်ကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပြောချင်ရင် အများကိန်းအတွက် အသုံးပြုတဲ့ Verb to be (are ) ကိုသုံးပါမယ်။ These are theirs. These aren’t mine. These aren’t yours. ဒီမြေပုံလေးက မြန်မာနိုင်ငံဆိုပါစို့။ ဒီနိုင်ငံမှာ ငါတို့တွေနေထိုင်ကြတယ်။ ဒါက ငါတို့အပိုင်ပါလို့ပြောချင်တဲ့အခါ This is ours. ကောင်းပါပြီ နောက်ထပ်လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင် That lipstick is ---- That sports car is ---- This money is mine, not yours. Yangon is ours, not theirs. ဒီနူတ်ခမ်းနီက တစ်ယောက်ယောက်ပိုင်ဆိုင်တယ်။ နူတ်ခမ်းနီဆိုတော့ မိန်းကလေးကပဲပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်လို့ ပိုင်ဆိုင်မှုနာမ်စား Her ဒီကားကိုတစ်ယောက်ယောက်ပိုင်ဆိုင်တယ်။ ကားဆိုတော့ အမျိုးသား၊ ကောင်လေးကပဲ ပိုင်ဆိုင်တာမို့ နာမ်စား his နောက်တစ်ခါ ဒီပိုက်ဆံက ကျွန်တော့်ဟာ။ မင်းဟာမဟုတ်ဘူး။ ရန်ကုန်က ကျွန်တော်တို့ပိုင်တာ။ သူတို့ဟာမဟုတ်ဘူး။ ကောင်းပါပြီ။ ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ ပိုင်ဆိုင်မှုနာမ်စားတွေအကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
Making Questions (do,does,did)
Making Questions (do,does,did) ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ do,does,did ကိုအသုံးပြုပြီး မေးခွန်းပုံစံလုပ်နည်းအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ do,does,did အကူကြိယာတွေနဲ့စတဲ့မေးခွန်တွေကို yes/no type Question (သလဲ၊သလားမေးခွန်း)တွေခေါ်ပါတယ်။ သူတို့တွေက ဟုတ်တယ်၊ မဟုတ်ဘူးဖြေရုံနဲ့အဆင်ပြေတဲ့မေးခွန်းပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံစည်းမျဉ်းလေးကတော့အကူကြိယာကိုရှေ့ပို့၊ ပြုလုပ်သူ ပြီးတော့ Mian verb ပြီးတော့ ကျန်တဲ့စာတွေဆက်ရေးပါတယ်။ Present Tense Do/Does + subject+main verb + the rest of sentence ကိုယ်မေးခွန်းလုပ်မည့်စာကြောင်းက Present Tense ဖြစ်နေမယ်ဆိုင် Do/does ကိုသုံးရပါတယ်။ ပြုလုပ်သူ Sub တစ်ခုကိန်းဖြစ်နေရင် Does ၊ ပြုလုပ်သူ sub ကအများကိန်းဆိုရင်တော့ do ကိုသုံးပါမယ်။ နောက်မှာတော့ ? ထည့်ပေးရမှာ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာစာကြောင်းလေးတွေလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ I look good in this shirt. ကျွန်တော်ဒီရှပ်နဲ့ကြည့်ကောင်းသည်။ ဒီစာကြောင်းမှာ main verb က Look good ဖြစ်ပါတယ်။ Main verb ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဒီစာကြောင်းဟာpresent tense ဖြစ်နေတာမို့ do/does တစ်ခုခုထဲရွေးရပါတော့မယ်။ Sub ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ I က တစ်ခုတော့ဖြစ်ပေမယ့် Do ကိုသုံးပါတယ်။ ဒါကတော့ပုံသေမှတ်ထားရမည့်အရာပါ။ Do I look good in this shirt? အဖြေကိုတော့ သလဲ၊သလားမေးခွန်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဟုတ်တယ်ဆိုရင်Yes, you do. No, you don't. He walks to school. သူကကျောင်းကိုလမ်းလျှောက်သွားသည်။ ဒီစာကြောင်းကိုမေးခွန်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဒီစာကြောင်းမှာ Main verb က walks ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ s ပါနေတဲ့အတွက် present tense လို့သတ်မှတ်နိုင်တယ်။ နောက်တစ်ခါ Sub က တစ်ခုကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက် Does ကိုသုံးပါမယ်။ Does he walk to school? Yes, he does. No, he doesn't. ဒီနေရာမှာ အကူကြိယာ does ပါနေတဲ့အတွက် Main verb မှာ s ပေါင်းပေးစရာမလိုတော့ပါဘူး။ She ate the ice cream yesterday. ဒီစာကြောင်းမှာတော့ past tense ဖြစ်ကြောင်းသိသာစကားလုံးတွေက main verb နဲ့ Yesterday ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Sub တစ်ခုကိန်းဖြစ်စေ၊ အများကိန်းဖြစ်စေ past tense ဖြစ်တာကြောင့် did တစ်ခုတည်းကိုသုံးလို့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ Did she eat the ice cream yesterday? အကူကြိယာ did ပါနေတဲ့အတွက် main verb ကို V1 အတိုင်းပဲထားရပါမယ်။ ပြန်ဖြေချင်ရင်တော့ဟုတ်တယ်ဆိုရင် Yes, she did. No, she didn't. ကောင်းပါပြီဒီနေ့လေ့လာခဲ့တာကတော့မေးခွန်းလုပ်နည်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။